Booliska Soomaaliya oo raadinaya Eedeysane Baxsad ah iyo Dadka oo la weydiistay taageero.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Booliska Soomaaliya ayaa baahiyey muuqaalka iyo magaca eedeysane baxsad ah oo la sheegay in loo maleynayo inuu ku sugan yahay dhulka Soomaalida iyo Degaanada Soomaali Galbeed ee Itoobiya.
Farriin uu Booliska Soomaaliya baahiyey ayaa dhammaan shacabka looga codsaday inay la baadigoobaan, isla markaana ka qeyb qaataan raadinta Cabdixakiin Cabdisalaan Aadan. Booliska ma sheegin dembiga uu ku eedeysan yahay ninkan muuqaalkiisa la baahiyey.
HOOS KA AKRHISO FARRIINTA BOOLISKA
Wanted. (Eedeysane Baxsad ah)
Dhamaan Muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalka gudihiisa iyo Deegaanada Soomaali Galbeed, waxaa laga Codsanaya in ay nagala qeyb qaataan baadi-goobka eedeysane Cabdi Xakiim Cabdisalan Aadan, kaas oo Sawirkiisa halkaan idinkaga muuqdo. Cidii aragta hanagala so xiriirto tel 991 gudaha dalka ama baraha bulshada, iyada oo macluumaadkiisa loo gudbinayo xarumaha Boliiska ee kuugu dhaw, ama xiriirada Baraha bulshada. Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Previous articleFarmaajo oo ka baaqsaday caleemo saarka Madaxweynaha Jabuuti & Rooble oo Somaliya u metelaya
Next articleIsmaaciil Cumar Geelle oo markii 5-aad loo caleemo saarayo Madaxweyne iyo madaxda ka qeyb galeysa